Madaxweynayaashii hore oo cabasho u diray RW Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynayaashii hore oo cabasho u diray RW Rooble
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal cabasho ah udiray Ra'iisul Wasaare Rooble, kaasoo ku aaddan guddiga doorashada ee kala-bar lasoo badalay!
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal cabasho ah oo ku saabsan guddiyada doorashooyinka ugudbiyay Ra'iisul Wasaare Rooble.
Labada mas'uul ayaa sheegay in weli guddiyadaasi ay ku jiraan ciidamo Nabad sugid ah, sida ay warka udhigeen, waxayna ka codsadeen Ra'iisulwasaaraha in dib-u-eegis kale lagu sameeyo xubnaha guddiga.
Sida ka muuqatay wax ka badalkii hore xubnihii 67 ka koobnaa iyadoo la tixgalinayo midowga musharaxiinta ayaa kala-bar xubnihii ay soo gudbiyeen meesha laga saaray, iyadoo weli ay jiraan xubno dheeri ah oo ku jira guddiyadaasi, waxaa kale oo cabsi weyn laga qabaa in xubnaha lagu soo baddali doono kuwa laga saaray liiska ay iyaguna noqon doonaan kuwa aan waxba ka duwaneen kuwii hore.
Khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay Golaha Midowga Musharixiinta, kadib markii ay isku aragti ka noqon waayeen go’aankii ay Xukuumaddu ku kala shaandheysay guddiga doorashada ee muranku ka taagnaa, sida ay Keydmedia Online shalay qortay.